2020 – Page5– NMDC
*** Seminar at NCRC Hall on 22nd January****
Teach for ASEAN is offering3fully-funded scholarships to NMDC students Please read description and information on Scholarships below! Registration Link: https://forms.gle/54Lvsr5XrKrMVZ6G8 * Deadline to apply: Thursday 23rd Jan Have you… – Applied to many jobs and haven’t achieved success?❌ – Developed career dreams but do [...]
Hello NMDCers…. ၂၃-၁-၂၀၂၀ ရက် ၊ ကြာသပတေးနေ့မှာ Business Management၊ English for Professional Purposes နှင့် Journalism မေဂျာများမှ တတိယနှစ် နှင့် နောက်ဆုံးနှစ် NMDCers တို့အတွက် Coca-Cola ၏ အထူးသီးသန့်အစီအစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ Scholarship Program ၊ Internship Program တို့အပြင် ဘွဲ့ရသွားပြီဖြစ်သော NMDCer Alumni များအတွက်လည်း “Next Generation Leaders Program” လို့ခေါ်တဲ့ Management Trainee [...]
Monday January 20th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Seminar about International News Reporting by Daw Aye Aye Win (AP)
Department of Journalism, National Management Degree College
Friday January 17th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကျွန်​တော်တို့ကျွန်မတို့နေထိုင်တဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ plastic တွေနေရာတိုင်းမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ အသုံးပြုနေကြပါတယ် Plasticတွေဟာအသုံးပြုရလွယ်ပေမဲ့ ကျွန်​တော်ကျွန်မတို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ဖျက်ဆီးနေတာပါ ဒီတော့ ကျွန်​တော်တို့ကျွန်မတို့အားလုံး ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်သင့်ပါသလဲ ကျွန်​တော်ကျွန်မတို့ BMSA က ကမ္ဘာကြီးကို တထောင့်တနေရာကနေ ကယ်တင်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ projectလေး တစ်ခုကရောဘာဖြစ်မလဲ အားလုံးပါဝင်ခန့်မှန်းပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ NMDCကျောင်းတော်ကြီး မှာ first year to finalကျောင်းသား​ကျောင်းသူ စုစုပေါင်းဆို 1000 ဝန်းကျင် လောက်ရှိပါတယ် အဲ့ဒီ ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်းတထောင်ဟာ နေ့စဉ် Convenience store​ တွေကနေ [...]
(Myanmar) NMDC ကျောင်းတွင်း ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား(14-1-2020)
Wednesday January 15th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) တက္ကသိုလ်များ ခြေလျင်နှင့်တောင်တက်အသင်း တောင်တက်ခရီးစဉ်၏ အစီအစဉ်များ
Monday January 13th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
E-SUN Bank Scholarship လျှောက်ထားသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်အစီအစဉ်
Hands Downs BM x EPP x THM x JNL! အခုဆိုရင် ပထမကြီးဦးအကြိမ်အဖြစ် NMDC SU ကနေ ဦးဆောင်ပြီးတော့ “An Evening of Friendship” လို့ခေါ်တဲ့ The Whole Freshers’ Welcome ပွဲကြီးကို ခမ်းနားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်က? သာမန် Freshers’ Welcome တွေရဲ့ အစဉ်အလာက ဖောက်ထွက်ပြီး ဆန်းသစ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ အတူ မေဂျာလေးခုလုံးမှာရှိတဲ့ Freshers တွေ ပိုမိုရင်းနှီးမှုရစေဖို့ [...]
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ မေဂျာပေါင်းစုံဘော်လီဘော ပြိုင်ပွဲကို (၁၀-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀)နာရီမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ကျင်းပ​ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု (က)၊ အုပ်စု (ခ) ခွဲထားပြီးတော့ အုပ်စုပတ်လည်ကစား ကြမှာဖြစ်ပါတယ် ပထမဦးစွာ BM I နဲ့ THM II မိန်းကလေးပွဲ စတင် ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်…Best of3ကစားမှာဖြစ်ပြီး ပွဲတစ်ပွဲခန့်မှန်းကြာချိန် နာရီဝက် ကြာမှာဖြစ်ပါတယ် မိန်းကလေးပွဲ တစ်လှည့်၊ ယောက်ျားလေးပွဲ တစ်လှည့် ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အုပ်စု ပွဲစဉ် တွေကိုတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် မှတ်တမ်းပုံများ
Friday January 10th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Hello NMDCers! NMDC Photography club ကို 13 ရက်နေ့မှာ စတင်​တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Club activity တွေ အခြားအသစ်အသစ်သော experience တွေ event တွေ Photography workshop တွေနဲ့အခြားအခြားသော activity မြောက်များစွာပါဝင်မှာမို့လို့ Photography Club ကနေ NMDC က new member လေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Club ကိုဝင်ဖို့အတွက် camera ရှိမှ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိက ကတော့ Photography အပေါ် passion [...]
Wednesday January 8th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
(Myanmar) Edu Link IELTS Preparation course ဝင်ခွင့်ရရှိသူများ